Induction Catheter Tipping Inkqubo yokuFudumeza isicelo
Amanqanaba aphezulu oKwenziwa kweCatheter yokuThintela ukuSebenzisa iiNkqubo zokuFudumeza
Esi sicelo sokwenza i-catheter sokufaka ukufudumeza isicelo sidla ngokufuneka kwiShishini lezoNyango xa kusenziwa imibhobho ye-catheter.
Ngokufakwa kwi-catheter ye-induction, amandla e-RF anyusa iqondo lobushushu kwisinyithi okanye isikhunta sobhedu, ngaphandle kokunxibelelana nokubumba okanye ukusebenzisa ilangatye elivulekileyo. Incam ye catheter yenziwa ngokufaka ityhubhu yeplastiki kwindawo eshushu yokufa okanye ukungunda ukwenza imiphetho ejikelezileyo. Isiphelo esirhangqiweyo setyhubhu ye-catheter sivumela ukuba ityhubhu ifakwe ngokukhuselekileyo emntwini ongonzakalanga kancinci kwizicubu zomzimba. Ukubumba kuya kuba nocingo olufaka kwimibhobho ukukhusela ukwenziwa kweebhloko. Ukuchaneka ngokuchanekileyo nangokuchanekileyo kokulawulwa kobushushu bokungeniswa kufanelekile kolu hlobo lwesicelo sonyango esichanekileyo. Ukubumba kuhlala kufakwa ibhatyi epholileyo yamanzi esetyenziselwa ukupholisa ukungunda okufudumeleyo ukubuyela kwiqondo lokushisa elichaziweyo elenza ukuba inkqubo yoqheliso iqhutywe lixesha elimiselweyo / umjikelo.
Induction ukufudumeza izixhobo ukuthintela ikheyetha kuqinisekisa inqanaba elikhulu lokuphindeka. Inkqubo yokuvelisa iyakhawuleza kwaye ichanekile.
Ukucoca itafile kufuna amandla asezantsi. I-HLQ ineeyunithi ezininzi zamandla asezantsi ezilungele ukuthintelwa kwe-catheter kwaye ziya kucebisa ngezixhobo ezifanelekileyo ngokusekwe kumacandelo kunye neemfuno ezizodwa zesicelo.
Ukufudumeza iCatheter Tipping Die
Injongo: Ukufudumeza i-catheter ye-aluminium catheter ifaka ngaphezulu kwe-2850F ngaphakathi kwemizuzwana emi-2 ukuya kwemi-5 yokwenza izinto zekathetha. Okwangoku, ukufudumeza kwenziwa kwimizuzwana eyi-15 ngesixhobo esidala sokungeniswa. Umthengi angathanda ukusebenzisa imeko eqinileyo izixhobo zokufudumeza ukunciphisa amaxesha okufudumeza kunye nokuphuhlisa inkqubo efanelekileyo.
Material: I-catheter ye-Aluminium yokuthambisa yokufa yokulinganisa i-3/8, i-OD kunye ne-2 ″ ende enomkhono ongajonganga magnetic ngaphezulu kwendawo yobushushu. Izinto ze-catheter zachazwa zifana neplastiki yetyhula. Kwakhona, i-0.035 ″ ubukhulu becingo zensimbi
yafakwa kumbhobho we-catheter ukukhusela ukuwa.
isicelo: I-DW-UHF-3kW yokuqina kombane yokuchongwa kwamandla kwagqitywa ekubeni kuveliswe ngokufanelekileyo ezi ziphumo zilandelayo:
-Ixesha lokufudumeza lemizuzwana eyi-3.3 ukufikelela kwi-5000F kunye nokwenza i-catheter yafezekiswa ngokusetyenziswa kwesibini (2) ngaphezulu kwesibini (2) ukujika i-coil helical.
I-catheter esemgangathweni yenziwa ngokucinezela i-1/2 ″ yetyhubhu ye-polyurethane kwisikhunta ngelixa igcina imilo ngokusebenzisa i-0.035 ″ yocingo ukunqanda ukuwa kwetyhubhu. Iziphumo zaselebhu zibonisa ukuba kuncitshisiwe ixesha elininzi eliya kuthi livumele ukonyuka okubonakalayo kwimveliso ngelixa kunganikelwa mgangatho.
Isixhobo sokuHulekaI-DW-UHF-3kWkW unikezelo lwamandla olomeleleyo lombuso kubandakanywa isikhululo sobushushu esikude esiqulathe i-1 (1.2) capacitor iyonke eyi-XNUMX µF.
Ukuphindaphinda: 287 kHz
iindidi Teknoloji tags UkuBamba itampu, Ukucofa iCatheter Brazing, Ukuhambisa ipayipi ngokufudumeza, i-catheter yokurhola ubhedu, Ukukhutshwa kweCatheter Tipping, Ukungeniswa kweCatheter Tipping Brazing, induction catheter yokufaka isifudumezi, Ukucoca i-catheter ye-RF, I-catheter ye-RF yokuthambisa ibhondi, I-catheter ye-RF yokuthambisa ukufudumeza Post yokukhangela